Ukudoba emazweni aseScotland
Ikhwalithi nezinhlobonhlobo zezokudoba zaseScotland ziphefumula kakhulu. Imvelo yezwe ikuvumela ukuba udobe amanye amanzi aphezulu emhlabeni, azungezwe indawo enhle kunayo yonke emhlabeni.
I-Highlands yaseScotland inikeza omunye umfula omuhle kunawo wonke kanye nokudoba nokuhlala ezweni laseScotland, ngezokudoba kwe-saumon emhlabeni jikelele. Kungani ungakujabuleli ngokugcwele ngenkampani yophiko ghillie Ukuphepha kubalulekile futhi ukuqondiswa kwe-ghillie yakho kufanele kulandelwe ngaso sonke isikhathi. Ulwazi lwabo lwamanzi alupheli futhi luyokwandisa amathuba okubamba,
Loch ukudoba Highland, izinzuzo ezivela amanzi amaningi flat (ikakhulu!!) Ukudoba ohlangene zokudoba loch, ezinye lochs ezinkulu kanye nezinye eziningi lochs nezindawo ezincane. izihlahla ezigcwele izinhlanzi zasendle ezimnyama ezenze lesi sigaba saseScotland kufanele sibe ngabadobi,
Ukudoba koMfula I-Highlands igcwele ukudoba okunamandla nokugubha imifula emikhulu nezincane, ngobuningi bezokudoba okudosa kakhulu, i-salmon, i-pike, i-trout trout nezinhlanzi ezinamahloni okwemvelo, kodwa nendawo enhle kakhulu.
Okuhlangenwe nakho kokudoba ngeke kuphelele ngaphandle kwemikhumbi emikhulu yokudoba kolwandle kanye nokuhamba, ngezindawo ezinhle kakhulu ezifakiwe njalo. Indlela enhle yokubheka amanye amabhomu omlingo, amabhishi namagumbane - futhi ujabulele ukudoba kosuku olukhulu - noma mhlawumbe ubheke indawo
Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa lisebenza endaweni yangakini kwihhovisi lolwazi noma umthengisi wokudoba.